ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လွှတ်တော်သည် ဆိတ်ဖွားကို အလိုမရှိ၊ ပြည်တွင်းစစ် ဆိုရင်ကော? | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး - အာဏာသိမ်းတာ လွှတ်တော်ပါ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လွှတ်တော်သည် ဆိတ်ဖွားကို အလိုမရှိ၊ ပြည်တွင်းစစ် ဆိုရင်ကော?
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃